धर्म के हो ? धर्मात्मा को हो ? – Khabar Silo
धर्म के हो ? धर्मात्मा को हो ?
हामीलाई पापको डर छ । त्यही कारण धर्मात्मा हुन मन लाग्छ । धर्मात्मा कसरी हुने त ? मन्दिर धाउने, पूजापाठ गर्ने, धूपबात्ती बाल्ने, प्रसाद ग्रहण गर्ने, भजन किर्तन गर्ने, ध्यान गर्ने । बिहान-साँझ नित्य मन्त्रोच्चाहरण गर्ने, जल अर्पण गर्ने, पूजाआजा गर्ने, आरती गर्ने । बेलाबखत जप, यज्ञ गराउने । बेलाबखत पुराण लगाउने ।
मन्दिर मात्र होइन, मस्जिद/गुम्बा वा अन्य कुनै धार्मिक थलो वा पवित्र स्थानमा धाउने । हामीलाई लाग्छ यत्ति गरेपछि हामी धर्मात्मा हुन्छौं । हामीले गरेका सारा पापहरु पखालिन्छन् । मृत्युपछि हाम्रो लागि स्वर्गको ढोका खुल्छ ।
तर, यी केही पनि धर्म होइनन् । सदियौं देखि हामी धार्मिक बन्ने नाममा यस्तै गरिरहेका छौं । हामीलाई धर्म भनेकै मन्दिर धाउनु, पूजापाठ गर्नु, मन्त्र जप गर्नु भन्ने लाग्छ ।
जबकी कहिल्यै मन्दिर नदेखेका, कहिल्यै भगवानका नाम नसुनेका, कहिल्यै पूजापाठ नगरेका, कहिल्यै धुपबात्ती नबालेका, कहिल्यै मन्त्र जप नगरेका व्यक्ति पनि धर्मात्मा हुनसक्छन् । त्यसो भए धर्म के हो त ?
धर्म भनेको अरुको उपकार गर्नु हो । कसैको भलाई गर्नु हो । कसैको उद्वार गर्नु हो । कसैको रक्षा गर्नु हो । कसैको संरक्षण गर्नु हो ।
जस्तो एक अनाथ बालक भोक, तिर्खाले ब्याकुल छन्, उनलाई भरपेट खाना दिनु धर्म हो । कुनै निर्दोष व्यक्तिमाथि अनावश्यक दोषारोपण गर्दै कुटपिट गरिदैछ, उनको रक्षार्थ उभिनु धर्म हो । कोही व्यक्ति जीवनको कठिन मोडमा छन्, उनलाई सहयोग गर्नु र उत्साह दिनु धर्म हो ।
धर्म भनेको सद्भाव पनि हो । सत्विचार पनि हो । सकारात्मक हुनुपनि हो । कृतज्ञ हुनुपनि हो । अर्थात मन शुद्ध हुनु पनि हो ।
कसैप्रति आग्रह/पूर्वाग्रह नराख्नु धर्म हो । कसैलाई हेला, हेय दृष्टिले हेर्ने, होच्याउने, जिल्याउने नगर्नु पनि धर्म हो । कसैको भावनामा चोट नपुर्‍याउनु पनि धर्म हो । सधै सन्तुलित, सकारात्मक र सही हुनु पनि धर्म हो ।
हामी बाँचेका छौं । बाँच्न पएकोमा सृष्टिकर्तासँग कृतज्ञ हुनु धर्म हो । हामीले खानेकुरा खान पाएका छौं, धर्तीसँग कृतज्ञ हुनु धर्म हो । हावा, पानी, बन-जंगल, प्राणी, चराचर जगतसँग एकाकार भएर नै हाम्रो अस्तित्व जोगिएको छ, सबैप्रति कृतज्ञ हुनु धर्म हो ।
हामीलाई बाँच्नका लागि रुख-बिरुवाले अक्सिजन दिएर मात्र पुग्दैन, पर्यावरणमा फैलिएका विषाक्त तत्वलाई आफुमा समाहित गरेर राख्ने सर्प, भ्यागुतो पनि चाहिन्छ । यी सबैप्रति कृतज्ञ हुनु धर्म हो ।
विनयी, विनम्रता पनि त्यही गुण हो, जसले हामीलाई धर्मात्मा बनाउँछ ।
हामीले गर्ने सद्व्यवहार, हामीले चिन्तन गर्ने सत्विचार, हामीले धारण गर्ने सत्चरित्र, हामीले ग्रहण गर्ने सदिक्षा । यी सबैले हामीलाई धार्मिक बनाउँछ ।
एउटा निरिह, कमजोर व्यक्तिलाई निस्वार्थ भावले सहयोग गर्नु धर्म हो । मन्दिर धाउनु, पूजापाठ गर्नु धर्म होइन ।
त्यसो भए, किन मन्दिर धाइन्छ ? किन पूजापाठ गरिन्छ ? किन भगवानको नाम पुकारिन्छ ? किन मन्त्र जप गरिन्छ ? किन यज्ञ गरिन्छ ? के यी धार्मिक कार्य होइन ?
किन पूजापाठ गर्ने ? मन्दिर धाउने ?
पूजापाठ गर्नु, मन्दिर धाउनु, जप गर्नु, तप गर्नु धर्म होइन । तर, धार्मिक प्रवृत्ति विकास गर्ने बाटा एवं माध्याम हुन् ।
किनभने धर्म भनेको हाम्रो प्रवृत्ति, व्यवहार र चिन्तनसँग जोडिएका कुरा हुन् । मन्दिर धाउँछौं, त्यो धर्म होइन । तर, धार्मिक बन्ने बाटा हुन् । पूजापाठ गर्छौं, त्यो धर्म होइन । धार्मिक बन्ने माध्याम हुन् । जब हामी मन्दिर धाउँछौं, पूजापाठ गर्छौं, जप, तप गर्छौं, तब हामी आफैलाई शुद्धिकरण गरिरहेका हुन्छौं । आफ्नो मनमा आउने नकारात्मक भावहरु पखाल्दै हुन्छौं । हाम्रो मनमा सद्विचारको विजारोपण गरिरहेका हुन्छौ ।
कृतज्ञ, विनयी, विनम्र हुन प्रेरित भइरहेका हुन्छौं । हामी कसैलाई दान दिन्छौं । प्रसाद बाढ्छौ । यसले हामीमा त्यागको भावना विकास गर्छ । अहंकार, दम्भ, इष्र्या नष्ट गर्छ ।
मन्दिर धाइरहँदा एवं पूजापाठ गरिरहँदा हामीले धर्म कमाउँदैनौ । यद्यपी त्यसले हामीलाई धर्मको मार्गमा जाने बाटो पहिल्याइदिन्छ ।
जब हामी मन्दिर पुग्छौं, हामी यस्तो सोचिरहेका हुन्छौ कि ‘पापबाट मुक्त भइयोस्’ । जब हामी पूजापाठ गरिरहेका हुन्छौं, हामी यस्तो सोचिरहेका हुन्छौ, ‘पुण्य कमाइयोस् ।’ साथसाथै हामी मन्दिर परिसरमा पुगेपछि सर्तक हुन्छौं । सचेत हुन्छौं । अनुशासित हुन्छौं । विनयी हुन्छौं । विनम्र हुन्छौं । यी मनको शुद्धिकरणका कुरा भए ।
जप-तप, मन्त्रोच्चारणले हाम्रो तन र मन दुबैलाई प्रभाव पार्छ । हामीले धर्मका लागि भनेर गरिदै आएका कतिपय विधीहरुले हामीलाई स्वस्थ्य, निरोगी, तन्दुरुस्त, सफा, सन्तुलित बनाउँछ । जब शरीर स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त हुन्छ, हाम्रो मनमा विकार पैदा हुँदैन ।
मन र शरीरको विकारलाई हटाउने विधी हुन्, हामीले गर्ने पूजाआजा । यद्यपी यी देखावटी गर्नु भनेको समयको बर्वादी मात्र होइन । यस किसिमको कुनैपनि कार्य विधीपूर्वक गर्दा नै त्यसबाट हामीलाई लाभ मिल्ने हो ।
तीर्थयात्रा एवं मठ मन्दिर
तीर्थयात्रा गर्नु भनेको कुनै मठ-मन्दिर वा धार्मिक थलोसम्मको यात्रा गर्नु हो । यात्रा गर्नु भनेको गाडी वा कुनै सवारी साधनमा होइन । पैदल गर्नु हो ।
यसको आफ्नै वैज्ञानिक महत्व र अर्थ छ ।
तीर्थयात्रालाई वास्तवमा सर्मपणको यात्रा भनिन्छ । त्यसैले त भौगोलिक रुपले अलि कठिन र विकट ठाउँमा यस्ता तीर्थस्थल हुन्छ, जहाँ हामी पैदल हिँडेर पुग्नुपर्छ । ति स्थलमा पैदल हिँड्ने सोंच बनाउनु, पैदल हिँड्नु भनेको हामीमा समर्पण भाव पैदा गर्नु हो ।
अक्सर यस्ता तीर्थस्थल वा मठमन्दिर त्यही हुन्छ, जहाँ पृथ्वीको चुम्बकिय अर्थात गुरुत्वआकर्षण बढी हुन्छ । यस किसिमको ठाउँमा हामीले फरक किसिमको उर्जा अनुभव गर्छौं ।
त्यसैले मन्दिर धाउनु, पूजापाठ गर्नु नराम्रो होइन । तर, पाप पखालिने स्वार्थ बोकेर पूजापाठ गर्नुको अर्थ छैन । धर्म कमाउने लोभमा मठ मन्दिर धाउनुको तुक छैन । यसको वैज्ञानिक महत्व र अर्थलाई बुझेर विधीपूर्वक त्यस्ता कार्य सम्पन्न गर्नु लाभदायक छ ।
काठमाडौँ । आजको समयमा मोटोपनाका समस्याहरू धेरै छिटो बढ्दैछन्। शरीरमा मोटोपना हुनाले धेरै रोगहरु निम्त्याउँछ। अत्यधिक मोटाईको कारण, तपाईंलाई उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, चिनी जस्ता रोगहरू हुने सम्भावना बढेको हुन्छ। तपाईंको शरीरका अन्य सबै अंगहरूमा बोसो लागेमा त ठिक छ तर तपाईंले कहिल्यै पेटमा बोसो बढ्न दिनु हुँदैन। मोटो पेट भित्र थुप्रै रोगहरूको खतरा छ। तपाईंले […]
मलाइ बिहानै 8/9 बजे नै नेपालगन्ज पुग्नु थियो, बिहानै साढे ५ बजे तिर हतारमा उठियो, मम्मिलाइ नि उठाएर आफ्नो लागि खाजा बनाउन लगाए किन कि कोरोनाको समय छ, सबै ठाउमा खाना नास्ता खाने जस्तो माहोल छैन, फ्रेस भए मम्मिले पकाउनु भएको नास्ता खाए, झोला तयार पारे यति गरुन्जेल ६ बजिसकेको थियो, मम्मिलाइ हतारमा ल अब […]
कुन राशि भएका व्यक्तिले कुन राशिसँग विवाह गर्दा जीवनमा कहिले हुदैन पैसाको कमी ?
के तपाईंहरु श्रीमान श्रीमतीको सँगको सम्बन्ध राम्रो छैन ? के तपाईहरु एक आपसमा झगडा गरिरहनुहुन्छ। यस्तो तव हुन्छ तपाईहरुको ग्रह अनुसारको स्वभावमा मेल खाँदैन ।पति पत्नीबीचको तनावका कारण राशि पनि हुन सक्छ । आउनुहोस् जान्नुहोस् तपाईको कस्तासँगको सम्बन्ध राम्रो र नराम्रो हुन्छ ।यसबाट तपाईंले कस्तासँग विवाह गर्न हुँदैन भन्ने सहजरुपमा थाहा पाउन सक्नुहुने छ। मेष […]
तपाईंभित्रको ‘म’ खोज्नुहोस् त